အစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံကိုလည်းအစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဟုခေါ်သည်. အစာကျွေးသည့်စက်ရုံတစ်ရုံလုံးသို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းအစာတောင့်မျဉ်းကြောင်းတွင်ကုန်ကြမ်းသိုလှောင်ရန် Silo များပါဝင်သည်, ကုန်ကြမ်းလက်ခံရရှိစနစ်, ပထမ ဦး ဆုံးအသုတ် system ကို, စနစ်ရောစပ်, ဒုတိယအသုတ်, ကြိတ်ခွဲစနစ်, pelletizing စနစ်, အအေးပေးစနစ်နှင့်အိတ်စွပ်ခြင်းဤစနစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံသုံးပစ္စည်းကိရိယာများသည်ယုန်အစာတောင့်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်,ကြက်ဘဲအစာတောင့်,ကျွဲနွားကျွေးမွေး,ဆိတ်သငယ်ကိုအစာကျွေးခြင်းတောင့်, သိုးတောင့်နှင့်အခြားကြက်အစာကျွေး.
ကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်အစာပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်ကိရိယာသည် 1-15TPH Feed Pellet Line ကိုရည်ညွှန်းသည်. ၎င်းသည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများအတွက်တည်ဆောက်သည်. အလတ်စားအစာတောင့်လိုင်းသည်ကြက်၊, မွေးမြူရေးနှင့်လည်းငါး (ရေနေအစာကျွေး). ဤအတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်အဓိကစက်များပါဝင်သည်: သံတူစက်ကိုအစာကျွေး, သီဟသူရ, စက်ရောစပ်ခြင်း, အစာကျွေး pellet ကြိတ်စက်လက်စွပ်, တောင့်တင်းအအေးစက်ကိုကျွေးမွေးပါ, လုံးလေးများထုပ်ပိုးစက်ကိုအစာကျွေး, etc.this ဒီတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံပစ္စည်းကိရိယာများယုန်အစာတောင့်ကို process နိုင်ပါတယ်,ကြက်ဘဲအစာတောင့်,ကျွဲနွားကျွေးမွေး,ဆိတ်သငယ်ကိုအစာကျွေးခြင်းတောင့်, သိုးတောင့်နှင့်အခြားကြက်အစာကျွေး.
အစာကျွေးခြင်းအပြောင်းအလဲနဲ့စက်ယန္တရားအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီ 10 ၏စီးပွားရေးအစီအစဉ်များကိုအောင်အတွက်အင်ဂျင်နီယာများ အစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှဖောက်သည်များအတွက်.
ပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးကိုကာဗွန် (သို့) သံမဏိကိုယ်ထည်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားပြီးဖောက်သည်၏ပစ္စည်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုရည်မှန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ပြုပြင်ထားသည်.
အစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံကိုလည်းအစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဟုခေါ်သည်. ပြည့်စုံသည် အစာကျွေးစက်စက်ရုံ သို့မဟုတ်အစာကျွေးသည့်တောင့်တင်းသောလိုင်းတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ကုန်ကြမ်းသိုလှောင်ရန် Silo များပါ ၀ င်သည်, ကုန်ကြမ်းလက်ခံရရှိစနစ်, ပထမ ဦး ဆုံးအသုတ် system ကို, စနစ်ရောစပ်, ဒုတိယအသုတ်, ကြိတ်ခွဲစနစ်, pelletizing စနစ်, စနစ်အအေးနှင့်အိတ်စွပ်စနစ်.
pellet feed ကို၏အားသာချက်များကဘာလဲ?
အစာကျွေးခြင်း mash သို့မဟုတ်ရိုးရာအစာကျွေးခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်, feed ကိုလုံးလေးများရှင်းလင်းဖြစ်ကြသည်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပိုမိုကျန်းမာပြီးအဆင်ပြေသည်. Feed pellets သည်မွေးမြူရေးအတွက်အစာအာဟာရကိုထောက်ပံ့ပေးသည်. ဤအားသာချက်များကြောင့်, feed pellet milling သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလူကြိုက်များလာသည်. Victor Feed စက်ယန္တရားသည်သင့်အတွက်တောက်ပသောမျက်နှာပြင်ဖြင့်တာရှည်ခံကျွေးမွေးသောအလုံးလေးများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်!
ရေ - ရေတူတူစက်
ဒဏ်ငွေကြိတ်ခွဲစက်, တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်, ကျယ်ပြန့်အကြီးစားနှင့်အလတ်စား feed ကိုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, အစားအစာပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ, ကုန်ကြမ်းကြိတ်ခွဲ.
လျင်မြန်စွာရောစပ်မြန်နှုန်း, တိုတောင်းတဲ့ရောစပ်, 30-120 စက္ကန့်ပိုင်း / အသုတ်; မြင့်မားသောရောစပ်ယူနီဖောင်း, CV ≤ 5%, ခွဲခြားထားခြင်းမရှိပါ; စက်၏ရောစပ်မှုသည်နူးညံ့သည်, အဆိုပါဝန်အကွာအဝေး variable ကိုဖြစ်ပါတယ်; အပြည့်အဝ - အောက်ခြေလျှပ်စစ်အဖွင့်နှင့်ပစ္စည်းချ, အစာရှောင်ခြင်းဥတု, အနိမ့်ပစ္စည်းကျန်နေတဲ့နှုန်းသည်
ထိရောက်သောသေချာစေရန်တင်သွင်းသောအရည်အသွေးမြင့်သောဝက်ဝံများနှင့်ဆီဖျံများကိုအသုံးပြုသည်, တည်ငြိမ်ပြီးအနိမ့်ဆူညံသံစစ်ဆင်ရေး. အစာကျွေးခြင်း၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် feeder သည်အကြိမ်ရေအမြန်နှုန်းကို အသုံးပြု၍ မော်တာကိုထိန်းချုပ်သည်.
အဆင့်မြင့်တန်ပြန်စီးဆင်းမှုအအေး၏နိယာမတွင်, SKLN စီးရီးတန်ပြန်စီးဆင်းနှုန်းကိုအအေးခံစက်သည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သောဆန်ခါထုတ်စက်ဖြစ်သည်, အရာက၎င်း၏ချောမွေ့ပစ္စည်းစီးဆင်းခြင်းနှင့်ယူနီဖောင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်.
အနိမ့်ပြိုကွဲ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလျော့နည်း, ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေး, ဂီယာအုံသည်ဂီယာမဟုတ်သောဂီယာလမ်းကြောင်းကိုကျင့်သုံးသည်, ရေနံချောဆီနှင့်အတူ dispense, ရေနံယိုစိမ့်မှုနှင့်အတူရေနံညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ
ဒါဟာအမြီးလျှောထောက်ခံမှု elastic ထောက်ခံမှုသို့ပြောင်းလဲစေပါသည်, သိုက်ပစ္စည်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါလက်ဝါးကပ်တိုင်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ